Sakha kanjani isiphepho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isiphepho. Igama elihle kakhulu ofuna ukulizwa njalo ekupheleni kwehlobo, ikakhulukazi uma imvula ibikade iphansi. Ziletha izimvula ebezikade zilindelwe, kepha futhi zingasusa ukukhanya, ngokuletha isibhakabhaka esinamafu.
Kodwa-ke, uma izimo ezifanele zikhona, zingaba yizimo zezulu ezingaba yingozi, njengeziphepho ezingaphandle komhlaba, imimoya yazo engaphephetha ngaphezu kwe-119km / h. Sazise indlela isiphepho esakhiwa ngayo.
1 Zakhiwa kanjani izivunguvungu?
2 Izinhlobo zeziphepho
Zakhiwa kanjani izivunguvungu?
Iziphepho, izindawo ezinengcindezi ephansi, noma izishingishane, njengoba zibizwa kanjalo kwesinye isikhathi, zenzeka e-Intertropical Convergence Zone (ITCZ), lapho umphambili obandayo unqamula ofudumele. Ngokwenza kanjalo, umoya oshisayo uyashisa, ujikeleze futhi ugcine ubhajwe ngaphakathi kuwo. Lo moya oshisayo obanjiwe ubizwa ngokuthi i-squall, esizungeza ngokwewashi eNyakatho Nenkabazwe, noma ohlangothini oluphikisana newashi e-Southern Hemisphere.
Zihlotshaniswa ne- imimoya enamandla y ukuphakama komkhathi, emboza isibhakabhaka ngamafu.
Izinhlobo eziningi zeziphepho zihlukanisiwe:
Isiphepho saseTropical: Zaziwa njengeziphepho ezishisayo, izivunguvungu neziphepho, yiziphepho ezakhiwa olwandle olujwayelekile. Zinendawo enengcindezi eqinile ebusweni kanye nengcindezi ephezulu emoyeni. Zikhiqiza imimoya engu-120km / h noma ngaphezulu.
Isiphepho se-Extratropical: Yakhiwa ezindaweni ezingaphezulu kwezingama-30º, futhi yakhiwa yizixuku ezimbili noma ngaphezulu zomoya.
Isiphepho esingaphansi komhlaba: yisiphepho esakha ezindaweni eziseduze nenkabazwe.
Isiphepho sePolar: lesi siphepho siqala ngokushesha okukhulu, ngamahora angama-24 kuphela. Singamakhilomitha angamakhulu amaningana ububanzi futhi sinemimoya enamandla, yize inciphe kakhulu kunaleyo yeziphepho.
UMesocyclone: Kuyi-vortex yomoya ecishe ibe ngamakhilomitha amabili kuya kwayishumi ububanzi owakhiwa ngaphakathi kohlobo lwezivunguvungu ezaziwa ngokuthi ama-supercell. Lapho ifu liwa, ijubane lokujikeleza liyanda ezingxenyeni ezingezansi, ukuze kwakheke ifu lefanele elingaholela esiphepho.
Iziphepho ziyizinto ezithakazelisa kakhulu, awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Sakha kanjani isiphepho
Sawubona, ngifunde ukuthi "Lo moya oshisayo obanjiwe ubizwa ngokuthi yi-squall, ejikeleza ngokwewashi eNyakatho Nenkabazwe, noma ngokuphikisana newashi eningizimu Nenkabazwe."
Uma ngingakutholi kahle, ama-anticyclone eNyakatho Nenkabazwe azungeza ngokwewashi.
Impela kunokuthile okungiphunyukayo, kepha angikude nokuqondwa ngale ndaba.